Lazaro Cardenas, Esq. - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Amalungu Ethimba/ Lazaro Cardenas, Esq.
Umphathi Wokusebenza Kwezezakhiwo
[Email protected]	Ucingo: 1-844-533-3367 Ext 13
Kungani ngibe Ngummeli Wezezakhiwo Nezindawo ezigxile Ekuvikeleni Ikusasa Labantu Namuhla:
Kusukela ngisungula inkampani, ngiye ngaba nenjabulo yokusebenza nemindeni eminingi. Ngithatha umsebenzi wami njengomeluleki ngokungathi sína futhi ngiziqhenya kakhulu ngokusiza imindeni ehamba ngeminyango yethu. Nsuku zonke, ngilwela ukuba ngudokotela ongcono futhi nginikeze izinketho eziningi nezeluleko ezingcono kumakhasimende ami, futhi lokhu kungenza ngijabule kakhulu futhi kungenye yezinto ezangizuzisa kakhulu empilweni yami.
Ngibe nenhlanhla enhle yokusebenzisana nabantu ababili abakhulu abangincoma ngokweqiniso futhi bobabili abanesimilo esihle nesimilo esifanayo. Banentshisekelo efanayo ngezindawo zabo zokuprakthiza futhi ekugcineni, lokhu yikhona okusiza kakhulu amakhasimende ethu. Imicimbi yamakhasimende ethu imvamisa ithinta izindawo zethu ezimbili noma ngaphezulu zokuzijwayeza futhi ibe nekhambi ngaphakathi ngaphandle kokubandakanya amanye amafemu awusizo olukhulu kumakhasimende ethu. Enye yezikhathi ezivuzayo kakhulu ukubona umthelela omuhle engibe nawo emindenini yonke, nokuthi umphumela womsebenzi wami uholela kanjani empilweni yabaningi.
Angisho ukuthi bengazi ukuthi ngizoba ngummeli, eqinisweni, indlela yami yokuya esikoleni sezomthetho ayizange iqale kuze kube kamuva kakhulu empilweni. Ngiye ekolishi nakwisikole sezomthetho ema-30 ami asezingeni kanye nama-40 angaphambili. Uyabona, angizange ngibe nesikole somthetho kumakhadi ami, ngiyindodana yomlimi futhi owenza ikhaya futhi ukuba ngummeli kwakungeyona into ebonakala ingenzeka. Ngenkathi ngibuyela ekolishi e2002 inhloso yami bekuwukuthola iziqu zasekolishi futhi ngibe yisikhulu enkampanini eyinhlanhla-i-100. (Okujwayelekile 'ukukhuphuka kwephupho lezitebhisi). Kwase kungaphezu kweminyaka eyishumi ngibe kule nkampani, futhi kwabonakala sengathi yilokho okwenziwa yilowo nalowo muntu kimi.
Kodwa-ke, ngemuva nje kokuthi ngiphothule iziqu zami zeziqu zokuqala nganquma ukuqhubeka nemfundo yami futhi ngabona ukuthi iziqu zomthetho yizinto ebengifuna ukuzilandela. Kwakungenxa yokwesekwa engikutholile okuvela emndenini wami nakwabanye babangane bami abangiphoqa ukuthi ngibheke kanzima esikoleni sezomthetho. Ngokubheka emuva, lesi kwakuyisinye sezinqumo ezinhle kakhulu empilweni yami futhi sangivumela ukuphuma ngesondo le-hamster yenkampani futhi ngilandele isifiso sami sangempela.
Ngesikhathi sami ekolishi, nami ngaqala ukuhileleka ezindabeni zobulungiswa bezenhlalo. Ngijoyine inhlangano yezokuvikela eyabizwa ngokuthi yiLatino Coalition yaseNew Jersey, engiyilungu layo futhi ngasebenza ezindabeni eziphathelene nokufika kanye namalungelo abantu. Umsebenzi wami wale nhlangano wawungivula iso, futhi ngandlela thile, kwakuyinto eyangigqugquzela ukuba ngiye esikoleni sezomthetho. Ngesikhathi somsebenzi wami wokuqala wokumela, ngabona ukuthi abantu abasemandleni bavame ukusebenzisa kabi isikhundla sabo ukuphatha abangenalo izwi nabangenamandla ukuze basebenzise inzuzo. Ukuzama ukunika labo bantu izwi nokubathethelela yingakho ngikujabulela ukuba ngummeli.
Ama-Wills, Amandla Wababambeli kanye Nezqondisi Ezithuthukisiwe Zokwelashwa
Khetha, Izakhiwo Nezindawo, Ukudalulwa, Imbuyiselo ye-Mortgage, Ukuqothuka, Ukulahleka Kwezimpahla Ezilahlekile, kanye Nama-Chancery Matters.
JD - Umthetho Wezikole Zama-Rutgers, Newark NJ
BA, Isayensi Yezepolitiki, I-Rutgers, University College
I-AA, Ukuphathwa Kwebhizinisi, I-Brookdale Community College
Ukwamukelwa kweBha kanye Nezayisense
Ungeniswe kwiNew York State Bar
UJason C. Bost, u-Esq. , MBA
UDerek (DJ) Soltis, Esq., MBA / MS